Showing १०१-११० of १,७१६ items.
मोरङका युवा नेता थापाद्वारा दश हजार माक्स वितरण
लक्ष्मीमार्ग/नेपाली कांग्रेस निकट युवा संगठन नेपाल तरुण दल मोरंङका उपाध्यक्ष खेम थापाको अगुवाइमा मोरंङको १७ वटै स्थानीय तहहरूमा दश हजार माक्स वितरण भइरहेको छ । कोरोना भाइरसको महामारीको संक्रमणबाट जोगिदै सामाजिक कार्यमा लाग्न युवा साथीहरूलाई सहयोग पुगोस् भनेर जिल्लाका १७ वटै स्थानीय तहहरूमा दश हजार माक्स वितरण अभियान चलाएको बताए । महामारीबाट जोगिन सबैले माक्स, सेनिटाइजर प्रयोग गर्नुपर्ने युवा नेता खेम थापाले बताए । हालसस्म ८ वटा स्थानीय तहमा माक्स वितरण गरिसकिएको र ९ वटा स्थानीय तहमा वितरण गर्न बाँकी रहेको थापाले बताए ।
मंगलबारे अस्पतालको नाम परिवर्तनका विरुध्द अनिश्चितकालीन अनसन
उर्लाबारी । प्रदेश १ सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा मोरङको उर्लाबारी मंगलबारेस्थित मंगलबारे अस्पतालको नाम परिवर्तन गरेको विरुद्धमा दलसम्मिलत संयुक्त संघर्ष समितिले आजबाट अनसन सुरु गरेका छन् । समितिले आइतबारबाट अनिश्चिकालीन रिले अनसन सुरु गरेका हुन् । मंगलबारे अस्पतालको गेट अगाडि नै अनसन बसेका हुन् । हिजो उर्लाबारीमा मोटरसाइकल ¥याली निकालिएको थियो । प्रदेश सरकारले आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा मंगलबारे अस्पतालको नाम फेरेर मदन भण्डारी अस्पताल तथा ट्रमा सेन्टर बनाउने घोषणाविरुद्ध नागरिक आन्दोलित बनेका छन् । आन्दोलनमा नेपाली कांग्रेस, जनता समाजवादी पार्टी नेपाल, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्ट
राष्ट्रिय जनमुक्तिका युवालाई कोभिड १९ बारे सचेतना
धरान । कोभिड–१९ बारे राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीको भातृ संस्था जनमुक्ति युवा महासंघ धरान नगर समितिका युवाहरूलाई सचेतना गराइएको छ । शनिबार धरानको होटल पूर्वीस्टारमा आयोजित कार्यक्रममा सरुवा रोग विशेषज्ञ डा. किशोर गुरुङले कोरोनाबारे सचेतना गराए । उनले कोरोनाबाट बच्नका लागि भौतिक दूरी र भिडभाडमा नजानका लागि आग्रह गरे । उनले कोभिड १९ बाट बच्नका लागि अनावश्यक काममा बाहिर ननिस्किनका लागि आग्रह गरे । उनले मास्क र सेनिटाइजर लगाउन सल्लाह दिए । महासंघका नगर अध्यक्ष मनि राईले युवाहरूलाई कोरोना भाइरस कस्तो खाल्को भाइरस हो र यसबाट बच्नका लागि अपनाउनुपर्ने उपायको बारेमा जानकारी गराइएको बताए । राष्ट्र
जनता आवास कार्यक्रममा अनियमिमताको संकेत
लक्ष्मीमार्ग । मोरङको बेलबारी नगरपालिकाको ‘जनता आवास कार्यक्रम’ मा अनियमितता भएको भन्दै नेपाली कांग्रेस र जनता समाजवादी पार्टी बेलबारीले सत्यतथ्य बाहिर ल्याउन माग गरेको छ । जनता आवास कार्यक्रम अन्तर्गत विपन्न घर परिवार घर निमार्ण गरिदिने कार्यक्रममा व्यापक अनियमितता भएको कांग्रेस र जनता समाजवादीले ठहर गरेको छ । बेलबारी नगरपालिका, साहारा नेपाल र ह्याबिटेड फर ह्युमानिटेड नेपालको संयुक्तमा बेलबारी–३, ४ र ११ नम्बर वडामा घर निर्माण भइरहेको हो । निर्माणाधीन घरहरू निर्माणमा प्रयोग गरिने सामग्री सम्झौता विपरीत कम गुणस्तरका प्रयोग गरिएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । विपन्नको नाममा आवास ब
धरान । राष्ट्रियसभाले हिजो पारित गरेको संविधान संशोधन विधेयक राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रमाणीकरण गरेकी छन् । सरकारले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी समेटिएको नयाँ नक्सा संविधानको निसान छापमा राख्ने संविधान संशोधन विधेयक प्रमाणीकरण गरेकी हुन् । दुवै सदनबाट बहुमतले पारित गरेको विधेयकलाई बिहीबार अपरान्ह राष्ट्रपति भण्डारीले प्रमाणीकरण गरेको राष्ट्रपति कार्यालयले जनाएको छ । प्रतिनिधिसभाबाट बहुमतले पारित गरेको विधेयक राष्ट्रियसभामा बुधबार पुगेको थियो । बिहीबार राष्ट्रियसभाको छलफलमा ५७ जना सदस्यले मतदान गरेका थिए । जबकि राष्ट्रियसभामा ५९ जना हुने व्यवस्था छ । एक सिट खाली रहेको राष्ट्रियसभ
धरानको खानेपानी असफल भएको भन्दैं बोर्ड अध्यक्ष मेयरलाई ज्ञापन पत्र
धरान / पानी जस्तो गम्भीर विषयमा स्थानिय सरकार कानमा तेल हालेर बसेको भन्दैं धरान उपमहानगरपालिकालाई संघीय लिम्बुवान मञ्च सुनसरीले ज्ञापन पत्र बुझाएको छ । आज मेयर तिलक राईलाई भेटी पार्टीले ज्ञापन पत्र बुझाएको छ । ज्ञापन पत्रमा कमिसनको चक्करमा फसेर एडिविको खानेपानी योजना असफल भएको दावी गदैं परीक्षण कालमा रहेको बेला पानी उपभोक्ताले सहज उपभोग गर्न नपाएको उल्लेख गरिएको छ । वर्षायामको महिनामा पनि धरानमा खाने पानीको समस्या खेप्नु भनेको धरानको स्थानिय सरकार जनताप्रति उत्तरदायित्व बोध नभएको त्रापन पत्रमा उल्लेख गरिएको छ । विगत लामो समयदेखि धरानको दीर्घकालिन खानेपानी समस्या समाधानको लागी कुल लगानी स
कोरोना लखेट्न प्रदेशमा ‘थ्रि टिको’ नीति: मन्त्री घिमिरे
विराटनगर / प्रदेश १ का सामाजिक विकास मन्त्री जीवन घिमिरेले कोरोना भाइरसलाई लखेट्न प्रदेश सरकारले ‘थ्रि टि’ को नीति लिएको बताएका छन् । मन्त्री घिमिरेले प्रदेशमा कोरोना भाइरस हटाउन ट्रेसिङ्ग, टेस्टिङ्ग र ट्रिटमेन्टको नीति लिएको बताएका हुन् । यी तीन माध्यमबाट हामीले कोरोनालाई लेखेट्दै आएको उनको भनाई छ । मोरङको गोठगाउँस्थित पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयको मेडिकल कलेज परिसरमा निर्माण गरिएको कोभिड उपचार केन्द्रबाट बिहीबार कोरोनालाई जितेर डिस्र्चाज भएका ४० जनालाई विदाई गर्दै मन्त्री घिमिरले प्रदेशमा कोरोना नियन्त्रण हुँदै गएको बताए । कोरोना संक्रमण अन्त्यको आधार तय हुँदै गएको उनले बताए
राष्ट्रियसभाबाट पनि संविधान संशोधन विधेयक बहुमतले पारित
धरान । संविधान संसोधन विधेयक राष्ट्रियसभाले पनि सर्वसम्मतले पारित गरेको छ । बिहीबार सम्पन्न मतदानमा ५७ जनाले मतदान गरेका थिए । राष्ट्रियसभामा ५९ जना रहने व्यवस्था छ तर, एक सिट खाली छ भने अध्यक्षले मतदान गर्ने प्रावधान छैन । उपस्थित सबै सदस्यले संशोधनको पक्षमा मतदान गरेका थिए । अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाका अनुसार बहुमतले नै संविधान संशोधन प्रस्तावमा मतदान गरेका छन् ।